डिभी लोटरी अक्टोबरमा खुल्दै, अब डिभी भर्दा पासपोर्ट अनिबार्य - VOICE OF NEPAL
३० भाद्र २०७६, सोमबार १०:११
1022 ??? ???????
अमेरिकी सरकारले यो बर्षदेखि डिभी लोटरीका नियममा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न लागेको हो । आगामी अक्टोबरको पहिलोसातादेखि खुल्ने डिभी लोटरी आवेदन दिनका लागि अब आवेदकसँग पासपोर्ट हुनुपर्ने भएको छ ।
यसअगाडि पासपोर्ट नभएका व्यक्तिले पनि नाम, जन्ममिति, फोटो लगायतका विवरणका आधारमा मात्र डिभी लोटरी फर्म भर्न सक्थे । यो बर्षदेखि डिभी लोटरी फर्म भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट जारी गर्ने निकायको विवरण र पासपोर्टको म्याद उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।
यदि पासपोर्टको म्याद गुज्रेको भएपनि डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाइने जनाइएको छ । तर प्राथमिक आवेदकको हकमा मात्र पासपोर्ट आवश्यक पर्नेछ, परिवारका सदस्यहरुको विवरण उल्लेख गर्दा भने पासपोर्ट चाहिने छैन ।
नयाँ नियमको पूर्ण पाठ यहाँ उपलब्ध छ ।
डिभी लोटरी भर्दा नक्कली आवेदनहरु पर्न थालेकाले त्यसको रोकथामको लागि नयाँ नियम ल्याइएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । कतिपय अवस्थामा नक्कली एजेन्सीहरुले आवेदकको सहमति विना पनि उनीहरुको डिभी लोटरी भरिदिने गरेको जनाइएको छ ।
आगामी अक्टोबरमा खुल्ने डिभी लोटरी आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि हो । सन् २०२० का लागि डिभी लोटरी भरेकाहरुले आगामी अक्टोबरदेखि भिसा प्राप्त गर्न सुुरु गर्नेछन् ।
भारतमा कोरोनाको कारण ५ हजार बढीको मृत्यु
बिल गेट्सका ८ बानी, जसले उनलाई सफल बनायो !
“भारतले नेपाल र चीनसँग सम्बन्ध बिगारिरहेको छ” : पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान
जथाभावी मास्क र पन्जा फालेमा ५०० युरोसम्म जरिवाना
लकडाउन खोलिएसँगै सैलुनका एक कर्मचारीबाट ९१ जना संक्रमित
लकडाउनमा भाेकै यी भारतीय सडकमा मरेकाे कुकुर खाइरहे भिडियो भयो भाइरल !
ब्राजिलमा कोरोनाले एकै दिन हजारको मृत्यु, राष्ट्रपति बोल्सेनारो ठट्टा गर्दै
नेपालले जारी गरेकाे नयाँ नक्सा भारतद्वारा अस्वीकार